Ukubuyiselwa kweDatha, ukuFumana iFayile kunye neSoftware yokuBuyisa i-imeyile ngu DataNumen
Iimveliso zeSoftware yokuBuyisa idatha
Sinikezela ngesoftware yokufumana kwakhona idatha kwiifayile ze-MS Office, ukubuyisela kwakhona i-imeyile, ukugcina kunye nokugcina iifayile, ugcino lwedatha, imifanekiso kunye namaxwebhu, kunye nezinye ezininzi.
Uluhlu olupheleleyo lwemveliso
Indawo yokugcina / yogcino
Umfanekiso / Uxwebhu
Wamkelekile kwi DataNumen
DataNumen yinkokeli yehlabathi kubuchwephesha bokubuyisa idatha. Sibonelela ngezisombululo zokubuyisela idatha kubandakanya iimveliso zesoftware eziwonga amabhaso, iinkonzo zokubuyisa idatha, kunye nekhithi yophuhliso lwesoftware (SDK) yabaphuhlisi.
I-interface kulula ukuyilandela kwaye uyiqonde. ndinguye
UMlawuli we-IT weSibhedlele esidla umhlalaphantsi
Agasti 30, 2020
Ikhithi yophuhliso lwesoftware (i-SDK) inokukunceda ukudibanisa ubuchwephesha bokubuyisa idatha obungenakuthelekiswa nanto kwisoftware yakho ngaphandle komthungo.
Uluhlu olupheleleyo lwabathengi